Share Hosting & Google Apps — MYSTERY ZILLION
Share Hosting & Google Apps
November 2009 edited December 2009 in Other
HOsting Error နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Thread မတွေ့လို့ ဒီထဲမှာပဲရေး လိုက်ပါတယ်
ဒီလို ဗျာ www.mgmg.com အတွက် Google apps လုပ်ထားလိုက်တယ်
[email protected] ဆို်ပြီး အကောင့် လုပ်ထားတယ် . အိုကေတယ် အဲဒီကို မေးလ်ပို့ တာလဲ inbox ထဲလဲ၀င်တယ် သူ့ဆီကလဲ မေးလ်ထွက်တယ် Mx entry တွေလဲ ချိ်န်းပြီးပြီ အကုန် active ဖြစ်တယ်
ဒါပေမယ့် website က email form ကနေမေးလ်ပို့ရင်တော့ အဲဒီ [email protected] ထဲမေးလ်မရောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ် တခြားမေးလ်တွေကို ပို့တာ အဆင်ပြေတယ် ကောင်းကောင်းပို့လို့ရတယ်
သံသယရှိတာက သူ့ webmail ထဲများ ရောက်နေသလားပေါ့ .. ဒါနဲ့ hosting မှာ [email protected] mail အကောင့်တစ်ခုလုပ် ပြီး ပို့လိုုက်တော့ ရောက်သွားတယ်ခင်ဗျာ
သိစေချင်တာက share hosting တွေရဲ့ ဒုခ ကိုပါ . Vps တွေမှာ အေးဆေး run တယ်
ဘာကြောင့်လဲတော့မမေးနဲ့ သိဘူး ဟီးဟီး သိတဲ့သူများ ဖြေရှင်းပေးကြပါခင်ဗျာ
့hosting က လူကြီးမင်းများနဲ့ live chat လုပ်ကြည့်တော့ အဲဒီအတွက် ဖွင့်မပေးထားတာပါတဲ့ ခင်ဗျာ သေရော ၊ ရတဲ့ သူများရှိရင်လဲ ပြောပေးကြပါအုံး
share hosting မှာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော် အရင်က mz.com ကို သုံးနေတာပဲ။ မူရင်း ရှိ တဲ့ MX record တွေ share hosting မှာ ဖြုတ်ပလိုက်။ နောက်ပြီး google ကပေးတာ တစ်ခုထဲထား။ သူပြောတဲ့ Priority အတိုင်းထားလိုက်တာပဲ။ ၂၄ နာရီတော့ စောင့်ရတယ်။ ပြီး၇င် ရပြီဗျ။
ဟုတ်တယ် ဗိုလ်စေ အစ်ကို့ lunarpages က mx record က တစ်ခုပဲ ချိန်းလို့ ရတဲ့ အတွက် နောက်ပြီး သူကလဲ ချိန်းရင် web mail သုံးမရဘူး ဆိုတာနဲ့ ကြောက်ပြီး customer ရဲ့ google apps မေးလ်ကို မလုပ်ပေးရဲ တာ .. နောက်မှ ဘာမှ မဆိုင်မှန်းသိလို့ လုပ်ပေးလိုက်တာ သူ့ website က contact form က ပို့ တဲ့ data ကို သူ့ google apps ထဲ ပို့ တာ အေးဆေး ရတယ် ဟီးဟီး share hosting နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ..:D:D